I-UNWTO iMiselwe iMicimbi ye-UNWTO: I-WTO imiselwe ngokungenasiphelo!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » I-UNWTO iMiselwe iMicimbi ye-UNWTO: I-WTO imiselwe ngokungenasiphelo!
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • Iindaba zeWired Travel • I-WTN
IBhunga Jikelele le I-World Trade Organization (i-WTO) kuvunyelwene ngasekupheleni kukaLwesihlanu (26 Novemba) ukuba ihlehlise iNkomfa yaBaphathiswa emva kokuqhambuka koxinzelelo olugqithisayo lwe-Omicron Covid Variant B.1.1.529 intsholongwane ekhokelele oorhulumente abaliqela ukuba banyanzelise izithintelo zokuhamba ezinokuthi zithintele abaphathiswa abaninzi ukuba bafike eGeneva.
Khange kubekho mpendulo xa eTurboNews uqhagamshelane ne Umbutho wezoKhenketho kwiHlabathi liphela (UNWTO) ukuba iNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezayo eMadrid ecwangciselwe ixesha elifanayo njengoko i-WTO General Council iya kumiswa kwakhona.
Owayesakuba nguNobhala-Jikelele we-UNWTO uFrancesco Frangialli nangona kunjalo wenze ingxelo ngolwesiHlanu esithi:
"Ngenxa yesoyikiso esitsha sezempilo kunye nembono yam, kuya kuba bubulumko ukuba i-UNWTO kunye neSpain barhoxe ngenxa yesi sizathu sicacileyo sempilo sabathunywa kunye nabaphathiswa ukuba baye eMadrid ngeentsuku ezimbalwa.
Kulindeleke ukuba kufike iindwendwe ezivela kwiindawo ezininzi zehlabathi. Ukongeza, ucalucalulo lwe-de facto oluya kubangela abameli abahlala kumazwe anezithintelo zokuhamba, ngokukodwa ukusuka kumazwe amaninzi ase-Afrika akuyi kwamkeleka kuMbutho apho abathathi-nxaxheba kufuneka baphathwe ngokulinganayo.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi wakhawuleza ukuncoma le nkcazo ngexesha elifanelekileyo nguNobhala oHloniphekileyo - Jikelele, ngokukodwa ngokubhekiselele kukubaluleka kwe-UNWTO General Assembly kubathathi-nxaxheba abaninzi ababhaliswe e-Afrika.
Cuthbert Ncube, Usihlalo we IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika ngoku ozimase umsitho eRwanda uyavumelana ne-WTN kunye nowayesakuba nguNobhala-Jikelele.
E IWorld Trade Organization, iNkomfa yaBaphathiswa ye-12 (i-MC12) yayiza kuqalisa nge-30 kaNovemba kwaye iqhube kude kube yi-3 kaDisemba, kodwa isibhengezo sezithintelo zokuhamba kunye neemfuno zokuvalelwa eSwitzerland kunye namanye amazwe amaninzi aseYurophu akhokele i-General Council Chair Amb. UDacio Castillo (Honduras) ukubiza intlanganiso engxamisekileyo yawo onke amalungu e-WTO ukubazisa ngale meko.
"Ngenxa yolu phuhliso olungathandekiyo kunye nokungaqiniseki okubangelwayo, asiboni enye indlela ngaphandle kokuphakamisa ukuhlehlisa iNkomfa yaBaphathiswa kwaye iphinde ibuyele ngokukhawuleza xa iimeko zivuma," u-Amb. UCastillo uxelele iBhunga Jikelele. Ndiyathemba ukuba uyakubuqonda ngokupheleleyo ubunzulu bale meko.
UMlawuli-Jikelele uNgozi Okonjo-Iweala uthe izithintelo zokuhamba zithetha ukuba abaphathiswa abaninzi kunye nabathunywa abakhulu babengenakuthatha inxaxheba kwiingxoxo zobuso kwiNkomfa. Oku kuya kwenza ukuba intatho-nxaxheba ngokulinganayo ingenzeki, utshilo.
Uye wachaza ukuba uninzi lwabathunywa luyigcinile ixesha elide ukuba intlanganiso ayinikezeli ngohlobo lonxibelelwano oluyimfuneko ukuze kubanjwe uthethwano oluntsonkothileyo kwimiba ebuthathaka kwezopolitiko.
“Esi ibingelocebiso lilula ukwenza … Kodwa njengoMlawuli-Jikelele, eyona nto iphambili kum yimpilo nokhuseleko lwabo bonke abathathi-nxaxheba be-MC12 – abaphathiswa, abathunywa, kunye noluntu. Kungcono ukwenza impazamo kwicala lokulumkisa, ”utshilo, ephawula ukuba ukuhlehliswa kuya kuqhubeka nokugcina i-WTO ihambelana nemithetho yaseSwitzerland.
Amalungu e-WTO aye ngamxhelo mnye ekuxhaseni kwawo iingcebiso ezivela kuMlawuli-Jikelele kunye noSihlalo weBhunga Jikelele, kwaye bathembise ngokuqhubeka nokusebenza ukunciphisa iiyantlukwano zabo kwizihloko eziphambili.
Kunokuthenjwa kuphela ukuba iWorld Tourism Organisation phantsi kobunkokeli obukhoyo be-UNWTO uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili unenkxalabo efanayo kubaphathiswa bezokhenketho, kwaye uyakuqonda ukubaluleka kokubonelela abathunywa abavela eMzantsi Afrika, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Zambia, kunye nezinye. Amazwe aseAfrika, iBelgium kunye neHong Kong ingqalelo efanayo eyenziwa nguMbutho woRhwebo weHlabathi.
Namhlanje iRhuluneli yaseNew York e-United States ibhengeze imeko yonxunguphalo kwiLizwe layo, nangona kungekho meko yentsholongwane entsha ifunyenweyo.
Amatyala aye abhaqwa eMzantsi Afrika, eBotswana, eBelgium, naseHong Kong, kwaye kulindeleke ukuba anwenwele.
KwiGeneva, liphupha elibi kuMbutho woRhwebo weHlabathi.
Le Nkomfa ibilindelwe iminyaka emine. Kwaye kukho izigqibo ezikhulu ekufuneka zithathwe kurhwebo lwehlabathi njengezigqibo zangaphakathi kwiZiko.
Iinyani ezinzima kwi-UNWTO ukwenza esi sigqibo:
Akukho lungiselelo kwiMithetho ye-UNWTO ejongene nolo hlobo lwemeko yongxamiseko. Isalathiso ekukuphela kwayo singaba linqaku lama-20 leMithetho enika iBhunga lesiGqeba esiLawulayo amandla okuthatha zonke izigqibo eziyimfuneko phakathi kweeseshoni ezimbini zeNdibano.
Ukuba iBhunga linqwenela ukukhokela, kuya kuba yindima yalo ngokucacileyo. Inqaku eliphambili kukuba akukho bathunywa eMadrid ngokukodwa abaphethe i-UNWTO, njengoko kunjalo ngemibutho emikhulu yehlabathi.
Okuninzi kuya kuxhomekeka kwisimo sengqondo kunye nezigqibo zikaRhulumente waseSpain kuba ayisiyompilo yabathunywa kunye nempilo yabasebenzi abasesichengeni, kodwa ukhuseleko lwabemi baseMadrid.